Ndị Kasị Mma Ikuku Okwu nke 2017 | Akụkọ akụrụngwa
Igwe okwu kacha mma nke 2017
Mgbe ị na-azụ ndị na-ekwu okwu ikuku, nke mbụ anyị ga-eburu n'uche usoro dị iche iche nke mgbanwe, ebe ọ bụ ezie na anyị na-enye onwe anyị usoro nkwukọrịta ikuku site na bluetooth ma obu WiFi, obughi ha nile ka emebere ka iwere gi si n’ebe a gaa ebe ozo.
Na wentanetị anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-ekwu okwu ikuku, n'agbata euro 10 na 25, ha niile nwere obere ma ọ bụ na-amachaghị ihe ndị China, nke na-eme ka anyị nwee obi abụọ banyere àgwà ha nwere ike inye anyị. Iji gbalịa inyere gị aka na ọrụ a, n'isiokwu a anyị ga-akwado kacha mma wireless okwu nke 2017.
Na mgbe m rụtụ aka na 2017, ọ pụtaghị na ha erutela ahịa ahụ n’afọ a niile na anyị ga-akwụsị, mana na kemgbe ha bidoro, ha na-egosi kwa afọ, na ha ka bụ oke nhọrọ taa. site taa, n'agbanyeghị na ọ nọrọ afọ ole na ole n'azụ ya.
Na mbu, achọrọ m ime ka nkatọ m na-enwe banyere ndị na-ekwu okwu Bluetooth bluetooth dị na ọnụahịa nke 10 ruo 25 euro, ebe ọ bụ na ụda dị mma na ike ọ nwere ike ịnye anyị, bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ. otu ihe ahụ anyị nwere ike ịhụ na ama anyị, yabụ ọ bụrụ na anyị chọrọ imefusị ego ahụ, enweghị nsogbu ọ bụla, mana iji nweta otu ogo na ike ahụ, ọ ka mma itinyekwu ntakịrị, na ụfọdụ nhọrọ m kwadoro na edemede a.
3 Bose SoundLink Agba II
4 Omni okike
5 Bose SoundTouch 20 Usoro III
6 Harman / Kardon Esquire Obere
7 JBL n'Aka 3
8 B&O GAY
10 JBL mkpirisi 2
11 EU Boom 2
14 JBL Gaa
15 Nkwado Editor
Ndị okwu ikuku nke Aukey na-enye anyị ọwa 10 W abụọ gụnyere subwoofers abụọ, nke na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ụda dị egwu na bass dị ike. Ndụ batrị ruru awa 12, nke na-eme ka ọ dị mma maka mgbe anyị na-eme atụmatụ iji ụbọchị dum pụọ n'ụlọ, ekele maka batrị 4.000 mAh. Ọ bụrụ na anyị achọghị iji njikọ bluetooth, anyị nwere ike ịhọrọ ijikọ akụrụngwa anyị ma ọ bụ ama anyị site na ntinye mmịnye 3,5 mm. Ahịa: euro 49
Dutchlọ ọrụ Dutch na-enye anyị ndị ọkà okwu ikuku. Ọ bara uru ịkọwa ụdị BM6B, ihe nlereanya nke na-enye anyị nnwere onwe nke awa 8, na-eguzogide ọgwụ na ntanye na ájá, yabụ anyị nwere ike itinye ya n'ụlọ ọ bụla nke ụlọ anyị, ma ọ bụ were ya mgbe anyị na-aga njem nọrọ ụbọchị n'èzí. O dakọtara n’usoro Izzy, yabụ anyị nwere ike ijikọ ihe ruru ndị okwu 5 ya na Izzylink gere otu egwu ahụ n’ime ụlọ dị iche iche. Philips BM6B nwere ọnụahịa na Amazon nke euro 125.
Zụta Philips BM6B
Bose SoundLink Agba II
Banyere ụlọ ọrụ Bose ahụ, echere m na ọ dịghị mkpa ka anyị kwuo ọtụtụ okwu, ebe ọ bụ na ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị na-enye anyị ngwaahịa kachasị mma na nke a, ma ọ bụ na ekweisi ikuku ma ọ bụ ndị na-ekwu okwu, na-ekwenye na ụlọ ọrụ ahụ nwere mgbe niile . Lda SoundLink Agba II, n'agbanyeghị obere nha ya, nke na-enye ohere dị mma, enweghị mmiri, dakọtara na njikọ NFC, nwere batrị 8-hour, dakọtara na Siri na Google Ugbu a ma anyị nwekwara ike iji ya dị ka aka efu. Ọ dị na 4 agba na Ọ nwere ọnụahịa nke euro 139.
Zụrụ Bose® SoundLink Agba II
N’etiti igwe okwu ikuku, anyị nwekwara ike ịchọta ọ bụghị naanị ndị na-ekwurịta okwu site na Bluetooth, mana anyị na-ahụkwa ụdị ọzọ nke ndị ọkà okwu na-ekwurịta okwu site na Wifi, si otú a na-agbasawanye ngwaọrụ ahụ, ọ bụrụhaala na ọ dị n'ime njikọ ikuku.
Otu n’ime ụdị ndị kachasị mma iji kụọ ahịa n’afọ a na Creative Omni, onye na-ekwu okwu arụmọrụ 4 dị elu, ndị ọkwọ ụgbọala Neodymium abụọ dị inch 1,5 na imewe radiator abụọ. O nwere oghere maka ịtinye kaadị microSD. Ọ dakọtara na Siri na Google Ugbu a site na njikọ bluetooth, ọ na-eguzogide ọgwụ splashes na isi mma ya bụ nke m kwuru n'elu: njikọta Multi-room WiFi. Na dị ọnụ na 113 euro na Amazon, ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma dị ugbu a na ahịa.
Zụrụ Creative Omni
Bose SoundTouch 20 Usoro III
Dị nnọọ ka anyị kwadoro onye na-ekwu okwu dị mkpirikpi site na ụlọ ọrụ Bose iji were ya ebe ọ bụla anyị chọrọ ya, ọ dịkwa m ka iwu ji m kwuo banyere SoundTouch 20 Series III, Ọkà okwu nke na-enye anyị njikọta site na bluetooth na mgbakwunye na Wifi, dị ka Creative Omni, nke na-enye anyị ohere ịchịkwa playback na-enweghị eriri na-enweghị nchegbu gbasara oke njikọ bluetooth n'oge ọ bụla.
Site na ịdị arọ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilogram 4 ọ bụghị ngwaọrụ iji buru ya si ebe a gaa ebe ọzọ, ebe ọ bụ na ebubere ya ka anyị jiri ya n'ụlọ anyị ma nwee ike ịnụ ụtọ ụda gburugburu ọ na-enye, dakọtara na isi egwu egwu egwu ma ọ bụ Deezer, ọ bụ gị nwere ike jikọta ndị ọkà okwu ndị ọzọ na ezinụlọ SoundTouch iji gee otu egwu ahụ na ngwaọrụ niile… Ọnụahịa Bose SounTouch 20 Series III rutere Euro 339 na Amazon.
Zụrụ Bose® SoundTouch ® 20 Series III
Harman / Kardon Esquire Obere
Companylọ ọrụ Harman / Kardon, nke obere ihe na-erughị otu afọ dị n'aka ụlọ ọrụ Korea nke Samsung, na-enye anyị Esquire Mini, ndị ọkà okwu dị na agba 5, nwere nnwere onwe nke aka elekere 8, gụnyere igwe okwu abụọ. inwe ike iji ya dị ka aka-n'efu na usoro ịkagbu mkpọtụ. Ebughị n'obi ka ha nwee obi ụtọ n'èzí, yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ mkpagharị n'ụlọ gị, Esquire Mini nwere ike ịbụ ihe ị na-achọ ma ọ bụrụ na ọnụahịa ya dabara gị. Euro 149 na Amazon.
Zụta Harman / Kardon Esquire
JBL n'Aka 3
Site na ike nke 20 watts na iguzogide mmiri na ájá, JBL Charge 3 bụ ndị na-ekwu okwu ebe niile anyị nwere ike ịga ebe ọ bụla. Ọ gụnyere igwe okwu abụọ nke na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ sistemụ ịkagbu mkpọtụ mgbe anyị jiri ya dị ka aka na-enweghị aka. Batrị mAh 6.000 na-enye anyị ohere nke awa 20 na ọnụahịa ya 139 euro na Amazon.
Zụta JBL CHARGE 3
Bang & Olufsen weputara ihe nlere nke di na ahia, ihe nlere anya ebe ikike na ike kariri ihe nha anya. N'agbanyeghị obere ya, ọ na-enye ezigbo bass na ike dị elu nke 2 × 140 watts, ihe siri ike ịchọta na ndị na-ekwu okwu nha a dịkwa oke. Autonomy bụ ike nke ọzọ ebe ọ na-enye anyị ya 24 awa nke na-aga n'ihu playback.
Banyere ibugharị ya, emere ya nke aluminom ma na-eguzogide uzuzu na splashes, enwere ya 7 agba ma nye anyị ohere ijikọ ha na B & O Play ndị ọzọ iji nweta ahụmịhe ikuku ikuku zuru oke. Egwuregwu B&O nwere ọnụahịa nke euro 249 na Amazon.
Zụrụ B&O Play
Akụkọ ama ama Marshall na-enyekwa anyị ndị ọkà okwu ikuku iji nwee ọ toụ egwu kachasị amasị anyị n'ụlọ anyị. Kilkpụrụ Kilburn, na-enye anyị ohere nke awa 20, nwere ngbanwe olu nke bass, treble, ekele maka onye isi okwu na ndị ọkà okwu abụọ maka akara dị elu, yana ikike mmepụta nke 25 w. Ọnụahịa nke Marshall Kilburn gbagoro na euro 217 na Amazon.
Zụta Marshall Kilburn
JBL mkpirisi 2
Emere JBL Clip 2 ka o were ha na anyi rue ebe obula, ebe o n’enye anyi asambodo IPX 7 gbakwunye na emere ya ihe eji egwu ujo. Site n’inwe igwe okwu, anyị nwere ike ịza oku. Ochichi ya ruru awa 8, ihe dị mma ma ọ bụrụ na anyị na-eme atụmatụ iji ụbọchị dum pụọ n'ụlọ ma chọọ ịnụ ụtọ egwu kachasị amasị anyị. Ọ dị na 5 agba na A na-akwụ ha ọnụ na euro 49.
Zụta JBL Clip 2
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọkà okwu na-eguzogide ọgwụ na ntan, were ya ebe ọ bụla ịchọrọ, UE Boom 2 na-enye anyị nnwere onwe nke ruru 15 awa n'ime obere oghere. N'ihe banyere ụda dị mma, ọ na-enye anyị bass dị ike, ọbụlagodi mgbe anyị tinyere ngwaọrụ ahụ na ike kachasị. UE Ọganihu 2 nwere ọnụahịa na Amazon nke euro 131.
Zụta UE Ọganihu 2
Sony nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ekweisi, nke nwere waya na ikuku nke ogo ya siri ike ịrụ ụka. Agbanyeghị, ọ dị ka n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ jisiri ike weta ogo ahụ na ndị ọkà okwu ikuku na ihe atụ doro anya nke ihe m na-ekwu bụ SRS-XB10L, ndị ọkà okwu nwere awa 16 nke nnwere onwe, dị na agba dị iche iche yana yana kọmpat imewe ka ọ ezigbo iji na-ewere ebe ọ bụla na-enweghị nchegbu banyere ohere ha nwere ike ogide. Sony SRS-XB10L, dị na Amazon maka naanị 49 euro.
Zụta Sony SRS-XB10L
Ee, ọzọ, anyị na-ekwu maka akara a, nke jisiri ike nweta akara na ahịa, n'ihi ogo nke ngwaọrụ ya. Wondị Wonderboom na-enye anyị ohere, yana nnwere onwe pere mpe karịa ụdị Boom 2, awa iri. Ọ na-enye anyị bass dị ike ma doo anya ma na-eguzogide ọgwụ iwere ya ebe ọ bụla anyị chọrọ, ebe ọ bụ na ọ na-eguzogide mmiri na uzuzu. UE Wonderboom nwere ike ijikọ ya na ngwaọrụ ọzọ UE Wonderboom maka ọ doubleụ abụọ. UE Wonderboom dị na 10 agba ma nwee dị ọnụ na 79 euro na Amazon.
Zụta UE Wonderboom
Mana ọ bụrụ n'ezie na anyị achọghị imefu nnukwu ego na ndị na-ekwu okwu ikuku, mana anyị chọrọ inweta ogo na ọnụahịa dị mma, ụlọ ọrụ JBL na-enye anyị ụdị Go, onye na-ekwu okwu dịkwa n'ọtụtụ ọnụ agba, yana nnwere onwe nke awa 5 na nke ọnụahịa ya bụ euro 28. Ọ bụrụ na ị na-achọ ogo dị mma na nnwere onwe abụghị nsogbu, JBL Go nwere ike ịbụ ihe ịchọrọ.
Zụta JBL Go
N'iso usoro nke amaokwu ndị gara aga, Bang Ọkà Okwu na-adọta uche maka nhazi ya. Site na ngwụcha nke jikọtara akwa na isi roba, ọ dị na nsụgharị abụọ, Abalị na-acha anụnụ anụnụ na Black Metal; ndò abụọ na-apụta ìhè maka ọdịdị ha na ịdị mma ha. Ọkà okwu a abụghị naanị ọmarịcha mma na fechaa - ọ nwere nha 189 x 85 x 49 millimeters-, ma na-enyekwa ikike na ịchịkwa onwe ha na obere nha: ọ gụnyere a 8W ọkà okwu na nnwere onwe nke ruru Oge 7 iji kwụsị ọrụ. Ngwa ngwa ngwa abụọ na ụdị nile nke dakọtara na ngwaọrụ Teknụzụ Bluetooth.N'aka nke ọzọ, ihe nlereanya Nnukwu okwu enwere ike ibughari ya site n'otu ebe rue ebe ozo site na ntinye aka ya na nha ya -160 x 300 x 76 millimita.
Zuru oke iji bugharịa ya n'etiti ime ụlọ nke ulo di nfe. Tụfuo onye na-ekwu okwu 20W yana batrị 4400 mAh, nke na-achota ruo awa 10 nke iji na-enweghị he. Dịkwa ka ngwaọrụ Bang Bang, ọ na - ejikọ ngwa ngwa na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ mbadamba Bluetooth
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Igwe okwu kacha mma nke 2017
Anyị nyochara ihe nyocha 27-anụ ọhịa Philips (276E7QDSW) na GIVEAWAY